Sida maamulaha isgaarsiinta ee hay'adda McKnight Foundation, Phoebe Larson waxay gacan ka geysataa yareynta isgaarsiinta istiraatiijiyadeed si loo horumariyo himilada hay'adda iyo yoolalka barnaamijka. Waxay taageertaa baahiyaha isgaarsiinta ee Foundation, waxay maareysaa howgallada tifaftirka dhijitaalka, waxayna siisaa la-talin isgaarsiineed hoggaanka sare iyo kooxaha barnaamijka.
Ka hor inta uusan ku biirin McKnight sanadkii 2020, Larson wuxuu agaasime isgaarsiineed u ahaa Maktabadda Dadweynaha ee Saint Paul. Kaalintaas, waxay hogaamisay istiraatiijiyad isgaarsiineed dhowr talaabooyin muhiim ah, oo ay ka mid tahay ciribtirka ganaaxyada maktabadda, isbaddel siyaasadeed oo wax ku ool ah oo soo dhoweeyay 42,000 oo qof oo horey loo xanibay kaararka maktabadda. Intaa waxaa sii dheer, waxay taageertay soo bandhigida Akhri Brave Saint Paul - barnaamij aqris dhaxal gal ah oo kusaabsan mowduucyada guud ee quseeya magaalada, sida xasillooni darrida guryaha iyo xalka cimilada — iyo horumarinta qorshaha istiraatiijiyadeed ee maktabadda 2019–22, kaas oo ku howlan ku dhawaad 3,000 oo bulshada ah. xubnaha.
Larson wuxuu horey uga soo shaqeeyay kaalin isgaarsiineed ee Madaarrada Magaalooyinka, Jaamacadda Hamline, iyo Kulliyada Carleton. Waxay haysataa MA isgaadhsiinta istiraatiijiyadeed ee Jaamacadda Minnesota iyo BA oo Ingiriis ah waxayna ka qaadataa kulliyadda Bates (Lewiston, Maine).